लुम्बिनी लर्निङ्गको अर्को सफलता, JFT N4 Level मा शत प्रतिशत उतीर्ण – Lumbini Darpan Online
Lumbini Darpan Online — १९ श्रावण २०७८, मंगलवार १४:१६0comment
जिल्लामै उत्कृष्ट लुम्बिनी लर्निङ्ग प्रा.लि. एक पछि अर्को सफलता तर्फ लम्किरहेको छ । विभिन्न भाषा, ब्रिज कोर्ष, सबै तहका ट्युसन, कम्प्युटर, लोक सेवा आयोग तथा शिक्षक सेवा आयोगका परिक्षामा जिल्लाकै सर्वोत्कृष्ट लुम्बिनी लर्निङ्ग सेन्टरले फेरी अर्को सफलता प्राप्त गरेको छ । सेन्टरले सञ्चालन गरेको जापानीज भाषा अध्ययन अन्तर्गत जे.एफ.टि.एन फोर (JFT N4 Level) मा शत प्रतिशत उतीर्ण नतिजा ल्याएको छ । बाणगंगा ६ निवासी सुवास आचार्य जे.एफ.टि.एन फोर तह अन्तर्गत ९३ प्रतिशत अंकका साथ उतीर्ण भएका हुन् ।
जि टु जि अन्तर्गत जापान फाउण्डेसनले लिएको जे.एफ.टि. परिक्षामा उतीर्ण भएसंगै रोजगारका लागि जापान जाने बाटो खुलेको छ ।
सेन्टरका प्रबन्धक असिम कंडेल क्षेत्रीले उतीर्ण विद्यार्थीलाई हार्दिक बधाई दिंदै सफलताको शुभकामना दिएका छन् ।
नाफा भन्दा सदैव विद्यार्थीहरुको भविष्यको लागि लागि परेको सेन्टरका प्रमुख क्षेत्री बताउँछन् । उनले निजि शैक्षिक संस्था भए पनि कहिले पनि नाफामा मात्र जोड नदिएको भन्दै विद्यार्थीहरुको भविष्य नै साकार पार्नमा सेन्टर प्रतिवद्ध रहेको बताए ।